पब्जीको विकल्पमा ‘फौजी’ ल्याउँदै अक्षय कुमार – korea pati
पब्जीको विकल्पमा ‘फौजी’ ल्याउँदै अक्षय कुमार
September 6, 2020 Korea patiLeaveaComment on पब्जीको विकल्पमा ‘फौजी’ ल्याउँदै अक्षय कुमार
भारतमा चिनियाँ गेमिङ एप पब्जीमा प्रतिबन्ध लागेसँगै भारतीय अभिनेता अक्षय कुमारसँग मिलेर एक कोर गेम्स नामक कम्पनीले ‘फौजी’ मोबाइल गेम ल्याउने भएका छन् । यो मोबाइल गेमलाई पब्जीको प्रतिस्पर्धीको रुपमा हेरिएको छ ।
कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार अक्टोबरको अन्तिमसम्ममा बजारमा यो गेम आउनेछ । कम्पनीका संस्थापक विशाल गोन्डलले समाचार एजेन्सी रोयटर्ससँग कुरा गर्दै यो गेमको पूरा नाम ‘फियरलेस एण्ड युनाइटेड गार्डस्’ रहेको बताए ।
उनले यो गेम निर्माणको लागि लामो समयदेखि काम चलिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले गेमको पहिलो लेभल भारतको चीनसँगको सीमा विवाद रहेको गलवान घाटीमा आधारित रहेको बताएका छन् ।
गत जुनमा भारत र चिनियाँ सेनाको बीचमा गलवान घाटीमा झडप भएको थियो । उक्त झडपमा कम्तीमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता दुई मुलुकको बीचमा तनाव चल्दै आएको छ ।
तनाव बढेसँगै भारतले लोकपि्रय गेमिङ एप पब्जीसहित चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेका ११८ अन्य मोबाइल एपमा बुधबार प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
भारतमा पछिल्लो वर्षयता पब्जी निकै लोकपि्रय रहँदै आएको छ । विश्वभर पब्जी खेल्नेमध्ये करिब २५ प्रतिशत भारतीय छन् । चीनमा १७ र अमेरिकामा ६ प्रतिशत प्रयोगकर्ता पब्जी खेल्छन् ।
कम्पनीका सह संस्थापक गोन्डलका अनुसार यो मोबाइल गेमबाट हुने आम्दानीको २० प्रतिशत भारतका लागि सहिद बनेका परिवारका सदस्यलाई प्रदान गरिनेछ ।
कम्पनीका अनुसार यो गेमको नाम ‘फौजी’ अभिनेता अक्षय कुमारले नै जुराएका हुन् । शुक्रबार अक्षय कुमारले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् यो गेमको बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले यो गेम ल्याउँदै गर्दा आफूलाई गर्व महसुस भइरहेको बताए ।अनलाईन खबर
जापानमा एक यात्रुले छक्याउँदा २१२ यात्रु होटेल क्वारेन्टिनमा
कोरियाले कोरोना नियन्त्रण गर्न ५.८८ बिलियन अमेरिकी डलर छुट्यायो !
एप्पल पनि मिसियो फाइभजीको दौडमा, आईफोनका नयाँ चार मोडल सार्वजनिक
October 14, 2020 Korea pati
रुसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार गरेको कति सत्य हो ?
July 15, 2020 Korea pati
अब फेसबुकमै इन्स्टाग्राम स्टोरिज हेर्न सकिने
September 8, 2020 Korea pati
दक्षिण कोरिया ‘हाइवे युग’ मा प्रवेश गरेको ५० बर्ष February 25, 2021
इपिएस काेरिया शाखाकाे याे कस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ ? भन्छ गलत सुचनाले हैरान भयौं February 21, 2021
KTX मा भेटिएकी ति सुन्दर यूवती लाई फेरी देख्न पाए … February 21, 2021
उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ्गकी श्रीमती एक बर्षपछी देखिईन ! February 19, 2021
कोरियाको एउटै कम्पनीबाट एकैपटक ११५ जना कोरोना सङ्क्रमित फेला पर्यो,अधिकाँश विदेशी कामदार ! February 18, 2021